RAHARAHA RABEKOTO RAOUL : Tsy nandrenesam-peo intsony ny Fitsarana Malagasy
Tsy nisy tohiny intsony ve sa very an-javony ilay raharaha fanenjehana ny tale jeneralin’ny Cnaps teo aloha sady Filohan’ny federasionan’ny Baolina kitra Malagasy, Rabekoto Raoul ? 24 septembre 2020
Nangina tanteraka ny Fitsarana Malagasy ary tsy nandrenesam-peo intsony mahakasika an’ity raharaha ity. Aiza ho aiza ny fandraisan’andraikitry ny Minisitry ny fitsarana ?
Raha hiverenana ny zava-nisy dia voarohirohy ho nanodinkodina volabe amina miliara teo anivon’ny Cnaps, Rabekoto Raoul nandritra ny fotoana nisahanany ny andraikitra maha tale jeneraly azy teo anivon’ity sampan-draharaham-panjakana ity. Voaenjika ho nanao fanamparam-pahefana tamin’ny andraikitra izay nosahaniny io ihany koa izy. Rehefa nandeha ny fanadihadiana nahitana porofo tamin’ny fahalovana nataony dia namoahana didy fampisamborana teto an-toerana avy hatrany ny tenany.
Efa tafatsoaka mangingina an’i Madagasikara aza ny Filohan’ny FMF ary hatramin’izao dia mbola mialokaloka toa tsy misy mpanenjika intsony any ivelany any, na efa namoahana didy fampisamborana teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa aza. Dia tsy ho foana ve ireo tsy matimanota raha toa ka hitsoaka ivelan’ny firenena Malagasy tahaka izao avokoa isaky ny avy manao ny tsy mety ?
Ankilany, mody fanina tanteraka ny Federasionina iraisam-pirenena momba ny baolina kitra (Fifa) izay manararaotra ny maha ambony azy, ka mbola mandray an-dRabekoto Raoul ho Filohan’ny FMF eto Madagasikara ihany na dia efa manana raharaham-pitsarana goavana aza. Tena marina maneso ny mpitondra fanjakana malagasy sy ny any ivelany Rabekoto Raoul. Iaraha-mahafantatra mantsy fa mbola nandray anjara fivoriana tamin’ny alalan’ny « visioconférence » amin’ny maha filohan’ny Federasionin’ny baolina kitra azy ny tenany iray volana mahery lasa izay. Manoloana izany indrindra no hanairana ny Minisitry ny Fitsarana izay azo lazaina ho mitazam-potsiny ihany eo anatrehan’ity raharaha ity.
Hatreto mantsy mbola tsy hita izay fandraisan’andraikitra mivaingana nataony mba ahafahana misambotra sy manasazy an’ity tale jeneralin’ny Cnaps teo aloha ity izay mihevi-tena ho tsy matimanota. Ekena fa misy ny lalàna mifehy eo amin’ny sehatry fitsarana indrindra amin’ny tranga fitsoahana mankany ivelany tahaka izao. Heverina anefa fa azon’ny Minisitry ny fitsarana atao tsara ny manetsika izay fifanarahana, araka izay voalazan’ny lalàna amin’ny « Interpol » na ireo firenena vahiny samihafa izay manana fifandraisana ara-pitsarana amin’i Madagasikara na ampahany mba ahafahana manenjika an’ity Tale jeneralin’ny Cnaps teo aloha ity izay mialokaloka any ivelany. Toa tsy miraharaha ny didy fampisamborana iraisam-pirenena ohatra i Soisy izay fantatra fa iafenan’ity tompon’andraikitra ity.
Tena maneso ny manam-pahefafa malagasy na iraisam-pirenena i Raoul Rabekoto raha jerena ny zava-misy ankehitriny. Inoana araka izany fa tsy hiraviravy tanana ary handray andraikitra tandrify azy amizay ny eo anivon’ny fahefana mpanatanteraka, izany hoe, ny minisitry ny Fitsarana satria efa nanao ny asany ny eo anivon’ny Fitsarana tamin’ny alalan’ny famoahana ny didy fampisamborana izay navoakan’ny « Cour Suprême » tamin’ny 18 jona 2020. Tsy misy idiran’ny resaka politika izao raharaha izao fa aoka izay ny tsy maty manota.